IHE: Bebel Tower, oyiyi nke Nebukadneza, Europe nzuko omeiwu Tour. | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Ala e repopulated mgbe Iju Mmiri ahụ, ndị ikom kere ihe alaeze na wuru na ndagwurugwu Sennar a na ulo-elu ga-eru n’eluigwe.
Ma Chineke etre ha oru ngo site blurring asụsụ ha, n’otu ruo mgbe ahụ, na gbasasịa ha elu nke Ụwa.
Ọtụtụ puku afọ mgbe e mesịrị, ala a repopulated ọzọ mgbe Agha Ụwa nke Abụọ, ndị ikom n’agbanyeghị na ha dị iche iche na-asụ asụsụ wuru ọhụrụ ụlọ elu dị na Strasbourg ka na-anọchi anya iwughachi nke alaeze ukwu nke mmadụ.
Anyị pụrụ ịhụ myiri nke ụlọ elu abụọ nke uncompleted na aha ọhụrụ a alaeze nke na-eme ọ dịghị e kwuru na Chineke ma a ụgha divinity « Europe. »
Ọ bụ dị ka ma ọ bụrụ na ndị ikom ahụ chọrọ na-emegide uche Chineke na-agọnahụ ya site n’izo aka chi ụgha na-elu ọtụtụ puku afọ mgbe e mesịrị reconstructing Alaeze Ukwu nke mmadụ.
Anyị Western mmepeanya nke egosiputara site na European ewu nke malitere na Grik alaeze ga-daa na ya ị ụzọ ọpụpụ nke Greece si Euro mpaghara. (Alfa na Omega)
Anyị nwere ike ịbụ azịza ụfọdụ amaokwu ndị a.
Daniel, Isi nke 2, na-31-35
31 « Ị ndidi, eze, a ọhụụ. Ebe a: a awụ, a oké awụ, nnọọ na-egbuke egbuke, guzo n’ihu gị, egwu ịhụ.
32 Nke a awụ, isi ya bụ nke ọla-edo ọma, ya obi na ogwe aka ọlaọcha, ya afọ na thighs nke ọla kọpa,
33 ya ụkwụ ígwè, ụkwụ ya akụkụ ígwè na akụkụ ụrọ.
34 Ị hụrụ: na mberede a nkume e bee si na-enweghị aka metụrụ, ma tie ya na awụ, ụkwụ ya nke ígwè na ụrọ, na nyawaa ha.
35 Mgbe ahụ, e tiwara, otu mgbe, ígwè na ụrọ, ọla kọpa, ọlaọcha na ọlaedo, dị ka igbogbo ọka n’ebe nzọcha mkpụrụ n’oge okpomọkụ; ifufe na-ebu ha na-enweghị a Chọpụta. Na nkume ahụ tie onyinyo ghọrọ a oké ugwu na jupụtara ụwa dum.
Greece ọ bụ a na obere nkume dị ihe oyiyi nke Nebukadneza, ga-ikwụpu na-ewetara ala alaeze ukwu ahụ na Europe na-kredul nke a ọhụrụ mmepeanya n’okpuru ọchịchị nke Jizọs Kraịst!
Ihe Chineke ga-eme n’oge a, anyị maara si Bible amụma ebe ha na-arụ kwa ụbọchị, na onye pụta ga-nloghachi nke Jizọs Kraịst na Ụwa!
Na ọ na-abịa n’isi nso!
Ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị bụ ma anyị na-karịsịa agbanahụ egwu ọdachi na ọdachi ndị na-kụrụ ụwa na ndi mmadu na-ma anyị ga-abụ akụkụ nke kechioma ndị ga-ahụ anụ ahụ nloghachi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na Ugwu Oliv .
Ime m hụrụ n’anya Ụmụnna na Kraịst chọrọ ka okwu ọma niile kọntaktị gị a njikọ maka kpọmkwem ohere m nile isiokwu: